Freeing Mind: ရှာဖွေဖတ်ရှုမိသော အကြောင်းအရာများ
ဂျိုးရစ်ချက် အသက်၁၈နှစ်နဲ့ ကျောင်းပြီးတော့ သူ့အဖေက ခေါ်ပြောတယ်။ “ငါ့သား... မင်းစာမေးပွဲလည်း အောင်ပြီ... အမှတ်လည်း ကောင်းတယ်။ တက္ကသိုလ်မတက်ချင်လို့ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘဏ်မှာခေါ်နေတယ်။ လခလည်း ကောင်းတယ်။ မင်းသွားလျှောက်ပါလား”
ဒါနဲ့ ဘဏ်ကိုသွား။ အလုပ်လျှောက်တော့ မန်နေဂျာက လျှောက်လာပုံစံ စာရွက်ပေးတယ်။ အဲ့ဒီမှာ မေးခွန်းကလေးတွေ ပါတယ်။ ဖြေပြီး မန်နေဂျာကို ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ ဘဏ်မန်နေဂျာက ...
“အင်း... တခြားဖြေထားတာတွေတော့ ကိစ္စမရှိဘူး။ ဒီမှာ မစ္စတာရစ်ချက်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ဖြည့်တာ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နော်”
“သြော်... နှစ်တိုင်းပေါ့ခင်ဗျာ” တဲ့။
ဇစ် (Zip) ကို 1890 လောက်က အမေရိကန်နိုင်ငံသား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ၀ှိုက်ကွန်မ်ဂျက်ဆင် က တည်ထွင်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်ကြာပါတယ်။ ရေခဲပြင်စီးတဲ့ ဖိနပ်မှာ ပထမဆုံး အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
ချစ်သူအတွက် ရေးမိတဲ့ စာတစ်စ
မင်းမှ မင်းပဲ... ”
Counterfeit drugs are sold under the names of real medicines. They often contain no active substance, or not enough to work. Paul Newton of the University of Oxford in England led an investigation. The researchers tested artesunate tablets that were used to treataman atahospital in eastern Burma last year. Artesunate is normally effective, but the twenty-three-year-old man died from common malaria. The fake tablets were sold asareal product made by Guilin Pharmaceutical of China. The scientists discovered that the tablets contained only ten milligrams of artesunate. The real product contains fifty milligrams. The hospital had boughtalarge supply of the drug. It was all fake. The researchers say there are now at least twelve different kinds of counterfeit artesunate. They say that in Southeast Asia, between forty and fifty percent of drugs identified as artesunate may contain no active substance.
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ မှတ်စု<?xml:namespace prefix = o />
အရေးပါတဲ့ နက်ဝက်နည်းပညာတစ်ခုပါ။ Cisco System ကနေ တည်ထွင်ထားတဲ့ Switch တွေ Router တွေများ အသုံးပြုပါတယ်။ IOS ဆိုတာ Package ကလေးတစ်ခုပါ။ Switching, Routing, Telecommunication တွေအတွက် တွဲဖက်ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်တဲ့ ညွှန်ကြားပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာ ရပ်ကလေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Multitasking လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အားသာချက်ကလေးလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ Configure လုပ်ဖို့အတွက် Interface ကတော့ CLI (Command Line Interface) ဖြစ်ပါတယ်။ Version အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ Function တွေ ကွဲပြားပါတယ်။ Support လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကွဲပြားပါတယ်။
အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
နတ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ Network Address Translation ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို Private Network တွေမှာ အသုံးများပါတယ်။ ဘယ်လိုသုံးသလဲ ဆိုတော့ Private Network မှာ စက်တွေ Internet ကို Access လုပ်ချင်ရင် ဒီအတိုင်းလုပ်လို့မရဘူး။ အဲ့ဒီစက်တွေမှာ ထည့်ထားတာ Unregistered IP Address တွေ။ တကယ့်တကယ် ရတဲ့ Register IP နဲ့ ရှိတဲ့စက်အရေအတွက် မလောက်လို့ သုံးရတာ။ အဲ့ဒီအတွက် NAT နည်းပညာရပ်ဟာ ဆရာကြီးဖြစ်လာတယ်။ IPV4 မှာ တကယ့်တကယ် ရတဲ့ IP အရေအတွက် နည်းတာကြောင့် ပါတယ်။ IP နည်းတော့ စက်အရေအတွက်လည်း နည်းတာပေါ့။ NAT ကို Router တွေမှာ ထည့်ပြီး သုံးလေ့သုံးထ ရှိကြတယ်။ Server တစ်လုံးကို Gateway လုပ်ပြီး သုံးတာထက် စာရင် ၀န်ပေါ့တာလည်း ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ IPv6 ပေါ်လာပြီ။ ဒါဆို.. IPv4 ကနေ IPv6 ကို Migrate လုပ်ဖို့လိုလာပြီ။ NAT Device တွေ စက်ပြီး လိုမလို မပြောတတ်တော့ဘူး။ NAT မှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတယ်။ တစ်ချို့ တစ်ချို့သော Protocol တွေနဲ့ အဆင်မပြေနိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ TCP/IP မှာတော့ အဆင်ပြေပြေ Run ပေးနိုင်တာ တွေ့ရတယ်။
VPN မှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးက Internet Web-Site Address တစ်ခုကို Request လုပ်လိုက်တယ်။ လုပ်လိုက်တဲ့ Request က NAT Device ကိုရောက်တယ်။ IP Address Change တယ်။ ပြီးတော့ Register IP တစ်ခုကနေ တဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ISP ကိုလှမ်းပို့ပေးတယ်။ ISP ကပြန်လာတဲ့ Respond ကို NAT ကပြန်ပြီးလက်ခံယူတယ်။ ပြီးတော့ Request လုပ်လိုက်တဲ့ Private Network ထဲက စက်ရဲ့ IP Address ဆီကို Respond လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ Private Network ကနေ Internet ပေါ် Request လုပ်တာကို Source Network Address Translation လို့ခေါ်ပြီး Internet ကနေ Private Network ဆီကို Respond ပြန်တာကိုကျတော့ Destination Network Address Translation လို့ခေါ်တယ်။
သဘောကျမိသော ဒီဇိုင်းပုံ တစ်ခု
Partnership can change your life. (CNN)
posted by BaganNat at 11:36 PM